मानिसहरुको रुने कारणहरु फरक–फरक हुन्छन् । तपाई के कारणले रुनुहुन्छ ? अर्थात् तपाईको आँखामा किन आँशु आउँछ । सामान्यतया पुरुष रोएमा राम्रो मानिँदैन । तर यस्ता थुप्रै मानिसहरु हुन्छन् जो एकदमै रुन्छन् । पहिलो प्रश्न यो रहेको छ कि पुरुष कम रुन्छन् भने यसको कारण के रहेको छ ? रुनुबाट के फाइदा हुन्छ ? यसका साथै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो रहेको छ कि आखिर मानिस किन रुन्छ ? विभिन्न अनुसन्धानहरु यो बताउँछ कि पुरुषको तुलनामा महिला बढी रुन्छन् ।
हल्याण्डका मनोवैज्ञानिक विंगरले रुनुमा थुप्रै अनुसन्धान गरेका छन् । उनी बताउँछन् कि पुरुष र महिलाबीच रुनुको फरक बाल्यकालदेखि नै आउँछ । यद्यपि जब शिशुको जन्म हुन्छ, चाहे महिला होस् या पुरुष दुवै बराबर रुन्छन् । नवजात शिशु यसकारण रुन्छन् ताकि आफ्ना आमा बाबुको ध्यान आफूतिर परोस् । तर यदि जब मानिस ठुलो हुन्छ तब कसरी महिला र पुरुषको रुने अनुपातमा फरक आउँछ ? जुन देशमा रुनुलाई नराम्रो मानिँदैन त्यहाँका मानिसहरु अत्यधिक रुन्छन् ।
तर रुनुलाई नराम्रो मान्ने देशमा भने मानिस कम रुन्छन् । विंगर ह्वाइट्सको रिसर्चमा एक अर्को अनौठो कुरा के रहेको छ भने धनी राष्ट्रमा मानिसहरु बढी रुन्छन् । यद्यपि विंगर यो ठान्दछन् कि समाजको साथसाथै टेस्टोस्टेरोन नामको हर्मोनको कारणले पनि हामी रुनुमा प्रभाव पार्छ । उनी यो बताउँछन् कि प्रोस्टेट क्यान्सरको शिकार भएका मानिसलाई उपचारको क्रममा जुन औषधि दिइन्छ, त्यस औषधिमा टेस्टोस्टेरोन कम हुन्छ ।
यसकारणले प्रोस्टेट क्यान्सरका बिरामीहरु धेरै रुन्छन् । यद्यपि तपाई यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरु यसकारण बढी रुन्छन् किनभने उनीहरुलाई क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोग लागेको छ । तर प्रश्न भने उही रहेको छ, हामी किन रुन्छौँ ? यसको जवाफ रहेको छ कि, हामीलाई थाहा छैन । सम्पूर्ण जीवहरुमा मानिसमात्र रहेको छ कि दुखी भएर रुने गर्दछ । पहिले भन्ने गरिन्थ्यो कि हात्ती पनि रुन्छ, तर अहिलेसम्म यसको कुनै बलियो प्रमाण छैन ।
हामीलाई थाहा छैन कि हामी दुखी हुँदा रुन्छौँ, तर कैयौं पटक खुसी हुँदा पनि हाम्रो आँखाबाट आँशु आउँछ । केही मानिसहरु बताउँछन्, कि मानिस सामाजिक प्राणी हो यसकारण कैयौं पटक रुँदै आफ्नो पिडा कम गर्छन् । तर यसको कुनै बलियो प्रमाण छैन । सायद चाहिनेभन्दा बढी भावुक भएर मानिस रुन थाल्छन् । विंगर आफ्नो रिसर्चबाट बताउँछन् कि मानिस रोएपछि आफूलाई हल्का महशुस गर्छन् । सन् २०१५ मा उनले केही मानिसहरुसँग केही विशेष फिल्म हेर्नका लागि आग्रह गरे । त्यसमा गरिएको अनुसन्धान अझैपनि रहस्य नै बनेको छ । यसमा अझै थुप्रै अनुसन्धानको आवश्यक रहेको छ ।